New Samsung Tab S7 FE iyo Tab A7 lite ayaa imanaya.
Waxaa qoray admin on 21-06-01
Laga soo bilaabo wararka la soo sheegay, Samsung Galaxy tab cusub ee S7 FE iyo Galaxy tab A7 Lite ayaa imanaya Juun 2021. Galaxy Tab S7 FE waxay ku saabsan tahay siinta macaamiisha astaamaha ay jecel yihiin qiimo jaban. Waxaa lagu dhisay muuqaal weyn oo 12.4-inji ah, oo ku habboon qaadashada madadaalada, wax soo saarka, mu ...
Samsung Tab S7 oo lagu daray VS iPad Pro 2020
Tan iyo markii ipad pro si macquul ah loogu arko kiniinka ugufiican gebi ahaanba. Hadda Samsung waxay sameysay Tab S7 oo lagu daray si ay u noqoto kan ugu fiican ee kiniiniga ah ee ugu quruxda badan abid ugu horreeyay. Aynu isbarbar dhigno qaababka. Marka hore, Tab S7 plus wuxuu la yimaadaa xeedho dhaqso badan oo la qabsi ah. Waxay leedahay taageero afartan f ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya kumbuyuutarka Bluetooth iyo kiiboodhka wireless?
1. Farqiga 1aad: Hababka isku xidhka ee kala duwan. Kiiboodhka Bluetooth: isku gudbinta bilaa-waayirka ah ee loo maro nidaamka Bluetooth, isgaarsiinta Bluetooth inta u dhaxeysa (10m gudahood). Kiiboodhka bilaa xarkaha ah: U gudbi macluumaadka aqbalida aqbaar qaas ah adoo adeegsanaya hirarka infrared ama raadiyaha. 2. Kala duwan ...
Feelo kee baa ku habboon iPad-kaaga cusub 11 11.9 inji 2021?
2021 cusub ipad pro 11 iyo 12.9 inch ayaa la heli karaa si loo iibsado nuska bisha May. Apple wuxuu yiri: Khibrada ugu dambeysa ee iPad. Hadda oo leh M1 joogto ah, muuqaal XDR ah oo muuqaal leh, iyo 5G wireless wireless. Rumayso in lagaa reebay inaad hesho. Miyaad dhan u diyaarisay ipad-kaaga cusub p ...
Kiis cusub oo loogu talagalay BOOX nova 3 midab akhristaha Dad badan iyo ka badan ayaa doorbida inay akhriyaan ebook-ka akhristaha. Way ku habboon tahay in lagu akhriyo buugaag badan oo ku jira akhristahaan khafiifka ah. Walwal ha ka qabin inaad sidato buugaag waraaqo aad u culus ah, oo u baahan boos iyo lacag badan. Hadda akhriste BOOX waa mid ka mid ah akhristayaasha loogu jecel yahay. Waxaan ...
Siidaynta Waxsoosaarka cusub ee Samsung galaxy tab A7 Lite 8.7 inch
Laga soo bilaabo wararka shisheeye shaaca ka qaaday, Samsung galaxy tab A7 Lite 8.7 inch ayaa dhawaan soo bixi doona. Nambarka nambarka SM-T225 SM-T220. Waa 8.7 inch oo leh mashiin qafiif ah oo jirka ah. Iyada oo isku xira USB-C. Cabirkaasi waa cabirka la jecel yahay, oo ku habboon in lagu shaqeeyo hal gacan. Hadda caato ah oo qafiif ah difaaca c ...
Xulashada ugu fiican ipad-kaaga
Xulashada ugu fiican ipad-gaaga Markaad hesho suuf cusub, waa inaad diyaarsataa qalabyo qaarkood oo lagama maarmaan ah. Tan ugu muhiimsani waa kiis difaac ah. Ipad-kaaga aad buu qaali u yahay oo waa inaad u ilaalisaa sida malabka .Wuu kula socon doonaa habeen iyo maalinba. Marka waa inaan tixgalino oo ilaalino isaga ama ...
Kiniiniga ayaa kici doona mustaqbalka
Suuqa kiniinku ma kori doonaa sannadkan cusub? Laga soo bilaabo faafa sanadkaan, xafiiska wareega iyo waxbarista ardayda ee intarnetka labaduba aad ayey caan u ahaayeen. Soohdinta goobta barashada xafiiska ayaa si tartiib tartiib ah u madoobaatay, jawiga shaqaduna kuma koobna xafiiska, guriga, cof ...
sii deynta alaabta cusub
Nakhshadda Cusub ee Isku-Darka Taabashada Koodhadhka TPU Case Maalmahan, waxaannu sii deynaynaa kiiskeenna kumbuyuutarka naqshadeynta cusub oo dhan –Magnetic TPU kiiboodhka kiimikada ipad-ka 4aad Jiilka 4aad 10.9 inji 2020. KIISKA AAD RUNTA LIKE DHAHAY. Waxay isku daraysaa trackpad sax ah oo leh kumbuyuutar cabbir buuxa leh oo loogu talagalay iPad-kaaga ...